कुराहरु Santorini, ग्रीस मा गर्न को लागि | सडकको लागि एक युगल
जुन 1, 2018
Santorini, वास्तव मा प्रसिद्ध "ग्रीक आइलल्स" को सबै भन्दा लोकप्रिय द्वीप, प्रतीक छ। इमानदार रूपमा प्रत्येक यात्रा व्यवसायमा प्रदर्शित गरिएको, लगभग हरेक पत्रिकामा फोटो खिचेको छ, र हरेक यात्राकर्ताको बारेमा सपना देखेको छ जुन त्यहाँ त्यहाँ छैन, यो स्थानको सूचीमा "संसारमा सबैभन्दा सुन्दर गन्तव्य। "यस्तो स्थानमा, यस्ता स्थानहरूमा" काम गर्ने "बारे चिन्ता सामान्यतया अस्तित्वमा छ। वास्तवमा, सैंटोरेनी फरक छैन, तर कुन द्वीपले प्रस्तावित यात्रीलाई सनसनीको ओभरलोड हुन सक्छ जसले त्यहाँ जानुभएको छ, नीलो-कैप गरिएका डोराहरू र सेतो-लुगा लगाइएको पर्खालहरू हेर्न जो कि टापुको चट्टानको अनुहारमा राखिन्छ।
के थाह छ लाई स्यानोटोनीमा के गर्नु जान्नुको बारेमा समान छ छैन गर्नु पर्ने। कुनै पनि कुरा तपाईं Santorini भ्रमण वर्षको समय, त्यहाँ पर्यटक हुनेछ। सबै ठाउँमा। तिनीहरू त्यस्ता चीजहरू हेर्न चाहन्छन् जुन तपाइँले गर्छन, र जस्तो कि प्रायः प्रायः लोकप्रिय गन्तव्यको साथमा तपाइँ "बाल्टी सूची" यात्रा कार्यक्रमका साथ व्यवहार गर्न चाहानुहुन्छ जुन तपाईले अरुलाई पनि सोच्नु पर्छ।
तपाईँलाई "माना" हेर्नको लागि कुरा हेर्नुहोस्।
आफ्नो तस्वीर पाउनुहोस्।
त्यसपछि ... छोड्नुहोस् केहि कुरा पत्ता लगाउनुहोस् आवश्यक हेर्न।
हामी तपाईँलाई के भन्नु हुन्छ कि यी चीजहरू के हुन्, र शायद साटोरेनिमा कहाँ बस्न सक्दछ (तर जहाँ रहन को लागि पूरा गाइड को लागि - यहाँ क्लिक गर्नुहोस!)। सैंटोरेनीको सुन्दरता, जुनसुकै ठाउँमा, मनमा र स्थानीयहरूको भाषामा छ। उनीहरूलाई सोध्नुहोस्, र तिनीहरूले के देख्न लायक के तपाइँलाई बताउनेछन् र के होइन? उनीहरूलाई सोध्नुहोला, जहाँ हामीले गरे, र तपाईं गरेमा खुसी हुनुहुनेछ। जनतालाई पछ्याउनुहोस् र तपाईका सँगी पर्यटकहरू कहाँ खान्छौ? यो एक मात्र हुनेछ राम्रो भोजन, अनावश्यक रूपमा।
तर, किन यात्रा जस्तो छ? किन असाधारण कुरा मात्र हो र हराएको छ र कुन कुरामा ठोकै परम्परागत पारंपरिक लागि जान्छ? हामी त्यहाँ त्यहाँ पुग्न मद्दत गर्नेछौं, र हो, तपाई बिना देख्न सक्नुहुने ती चीजहरूको लागि सहि आदित्य भुक्तानी गर्नुहोस्।
सैंटोरेनी सबै फन्ट छैन फोटो शूट खराबी भएका मोडेलहरूसँग टाढाड नीलो रंगका पूलहरू छन्। वास्तवमा, त्यो सैंटोरेनि पनि छैन।
पहिलो, सेन्टोरिन ग्रीक हो। हड्डीबाट माटोबाट मार्को देखि मासु बाट, सेन्टोरिन ग्रीसको रूपमा एथेन्सको रूपमा हरेक बिचमा छ, र उनको इतिहास उत्तरमा (जसलाई हामी पनि प्रेम गर्दछौं) को रूपमा उल्लेख गरिएको ओभरलेर्डको रूपमा उल्लेखनीय छ। यदि तपाईं Santorini को आत्मा महसुस गर्न चाहानुहुन्छ, पोस्टकार्ड्समा हल्लाएर के बाहिर साँच्चै अवस्थित छ र टी-शर्टमा छापिएको छ, मेगलोगोरीमा जानुहोस्।
सैंटोरेनीको सबैभन्दा ठूलो पारंपरिक युनानी गाँउ, मेगलोचोरी फिरा (जो थरा के नाम से जाना जाता है), और दक्षिणी बर्बाद शहर के अकाटोटीरी के बीच में द्वीप के पश्चिमी तट के नीचे स्थित है। यहाँ, निलो टाइलले सेतो स्टुकोको साथ तान्नमा काम गर्दछ, ठिकै प्वाल पार्छ, बिरालाहरू र बच्चाहरू चमकले रंगमा चल्छ। आइतवारको मुस्कुराहट मामूली घरबाट बाहिर निस्किन्छ, प्रतीत भई तपाईलाई चित्रण र विचित्र र शान्त ईश्वरहरू तल।
यो Santorini होइन तपाईं बेचेको छ, तर यो एक हो कि तपाईं हेर्न चाहनुहुन्छ। एक पसल रक्षक यहाँ झाडिएको छ। उनको अलमारी स्थापनाको लागि त्यहाँ ताजा पकड्ने रेस्टुरेन्ट रेस्टुरेन्टर। नीलो बिहानको गर्मीमा उनको साइकल चलाउने एक बच्चा।
यो idyllic छ, यो सुन्दर छ, र यो वास्तविक हो। त्यसकारण, पूलबाट बाहिर जानुहोस्। समुद्र तट मा एक टैक्सी पाउनुहोस्, र बस Megalochori को सडक मा गुम हो। घुमाउनुहोस्। खानुहोस् Sit। हेर्नुहोस्। साँढे। लाइभ।
सानो, स्थानीय, ग्रीक भोजनालयमा खाओ
Santorini मा खाना उत्कृष्ट छ, र परम्परागत यूनानी भाडा समावेश छ, साथसाथै डीप्स, स्प्रिड, र फ्याक्चरहरुमा बढी स्थानीय छनौटहरू समावेश गर्दछ।
यहाँ Santorini मा एक महान रेस्टुरेन्ट खोज गर्न को लागी तपाईका कुञ्जी हो - स्थानीयहरूलाई सोध्नुहोस्। स्थानीयहरूले तपाईंलाई कहाँ जाने भनी बताउनेछन्, र थप महत्त्वपूर्ण कुरा, कुन स्थानहरू पर्यटकहरूको अधिक महसुस गर्नेछ र बचाउन सकिन्छ। हाम्रो पसंदीदा, पहाडी को माथि मा प्राथमिक पट्टी नजिकै फिरा मा स्थित Naoussa छ। रोमांटिक सेटिङ जोडाहरु को लागि आदर्श छ, र caldera र पहाडी को एक महान दृश्य प्रदान गर्दछ।
अक्टोटीरी को किनारों
सान्टोरेनिलाई बुझ्न, तपाईले जहाँ पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ, यो जान्न मद्दत गर्दछ कि कुन स्थानले ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यबाट फरक पार्छ। आफैलाई सोध्नुहोस् "यहाँ के भयो भने त्यहाँ अन्यथा भएको छैन?" यदि तपाइँ त्यो प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुहुन्न भने, तपाईं गहिराइमा पुग्नु भएको छैन।
मेगलोकोरीबाट अगाडी दक्षिण दक्षिण अक्टोरीरी नामको सानो संलग्न पुरातात्विक संरक्षण हो। एक्क्रोटिरी, संसारमा सबैभन्दा आकर्षक आकर्षक उत्खनन मध्ये एक, 3,500 मा यसको पुनरावृत्ति सम्म सम्म 1967 बर्ष भन्दा बढीका लागि खपत, मलबरा, चट्टान र पत्थर अन्तर्गत राखिएको छ।
एक पल्ट मिननियन द्वारा बसेको, अकतोटीरी को धेरै द्वारा अटलांटिस को कथाहरु को पछि प्रेरणा को लागी माना गएको छ, र उनको बारे मा पतटो फिर्ता डेटिंग संतहरु को बारे मा लेखिएको थियो। दिलचस्प छ, धेरै मिनन प्रभाव को सफलतापूर्वक पुनः चकित गरिएको छ, जसमा हर दिन को जीवन, परिवार, र धार्मिक प्रथाओं को चित्रण, र मिनीओ बिल्डर्स को प्रतिभा को चित्रण मा बर्तनों, पेंट फ्रेस्को को चित्रण प्रकट भएको छ।
लामो समयदेखि हामीले लोड-असरको ज्ञान पाएका थियौँ, लामो संरचनाको निर्माण र उन्नत निर्माण, अक्रोटिरीमा मिनोन्स एकाधिक स्तरको ढाँचा (माथि 50 फिटसम्म उचाई) निर्माण गर्दै थिए कि पुरातत्वविद्हरू अझै पूर्णतया पूर्ण रूपमा काम गरिरहेका छन्।
ओपन एयर सिनेमा हेर्नुहोस्
यो ती चीजहरूमध्ये एक हो जुन तपाईं सजिलै अरु अरु पनि पाउन सक्नुहुन्न, र निश्चित रूपमा सन्ताटोनीमा सेटिङको प्रकारमा होइन।
कामारी ओपन एयर थियेटर वास्तवमा यो के जस्तो देखिन्छ - एक बाहिरी थिएटर। तर राम्ररी छायामा, आरामदायी वातावरण पनि एक ठाउँ हो जुन ठूलो भोजन, उत्कृष्ट ककटेल सेवा गर्दछ र स्यानोटोनीमा सूर्यको रमाइलो रमाइलो तरिका प्रदान गर्दछ। यसो गर्दा, तपाइँ पृष्ठलाई पुरानो सेन्टोरेनीबाट नयाँमा बदल्नुहुन्छ, अर्को लाई जेनेरिक सोचाको मजा लिनुको अर्थमा यो कलाकारलाई इमर्सिभ सेटिङ प्रदान गर्ने भन्ने बारे मनपर्छ - केहि सैंटोरीनि यसको शुरुवाती रेकर्डबाट नै चिनिएको छ।
कमारी गाँउमा मिक्स विविध छ, जस्तै थियेटर नयाँ रिलीज र केहि पुरानो क्लासिक्स खेल्छ, र प्रायः अंग्रेजी-सबटाइटल ग्रीक क्लासिक्स जोडा राम्रोसँग घरको शराब र सानो सानो पट्टेको साथ। यो अनुभवहरू मध्ये एक हो जसले तपाईंलाई फिर्ता Santorini मा ल्याउँछ।
सूर्यास्तका लागि सही स्थान पत्ता लगाउनुहोस्
हो, यो पहिले नै तपाईंले सुनेको छ, तर यो केवल सूचीमा बेपत्ता हुनुको लागि सूचीमा हुनुपर्छ।
स्यानोटोनीमा ओया देखि देखी सूर्योदय संसारमा सबै भन्दा उत्तम छ - यो केवल अविवाहित छ। जो पनि मिश्रण छ यो शाम को जादू को प्रतीत हुन्छ, चाहे प्रत्येक पहाड को हरेक र हरेक व्यक्ति को उदास देखि चुपचाप चुपचाप देखि नीले रंग को गहराई मा डुबकी दूर पहाड को एक सुंदरता को प्रतीक या प्रतीत हुन्छ, तपाईंसँग जोडिएको छ।
अथवा यसको सट्टामा तपाईंसँग जोड्नु हुन्छ।
कुनै पनि तरिका, ओया मा सूर्यास्त अन्डरित गर्न सकिँदैन, र कुनै पनि सूची छोड्न सकिँदैन। तैपनि, तपाईं कसरी प्राप्त Oia मा यो सिद्ध दृश्य? तपाईं बस यो सानो शहरमा जहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ र उही प्रभावकारी प्रभाव प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ?
तर, हामी स्थानमा ठुलो स्याउ र नीलो डोमेस स्थापना गर्ने ठाउँको स्थानमा ठोकरहेछौं, र मैले ट्रिसीको उत्सुक इन्द्रमा यो प्रशंसा गरेको छु! जब तपाईं ओरेमा पार्क गर्नुहुनेछ, तपाईं पार गर्नुहुनेछ र up शहर को मुख्य केन्द्र मा। विक्रेताहरू टाँस्नुहोस्, जसमा प्रायः तपाईंको बाँयामा हुनेछ, जबसम्म तपाइँ प्राथमिक हिड्ने बायाँ (पहाडको निचो अन्तबाट) दाँया तिर (कहाँ सूर्य सेट गर्दै) फेला पार्नुहुन्छ।
यस पथसँगै साथमा हिँड्नुहोस् जब सम्म तपाईले सानो "नुक्स" हेर्न सक्नु भएको छैन तपाईंको बाँयामा खोल्नुहोस्। यो लगभग कम, माथिल्लो गल्तीहरू जस्तो देखिन्छ, तर यो वास्तवमा केवल मुख्य सडकको 15 फिटमा 20 को कुरा हो। यस सानो "नक्स" को भित्र र बाहिर आफ्नो बाटो काम गरिरहनुहोस् जब सम्म तपाइँ तपाइँले चाहानु भएको दृश्यसँग भेट्टाउनुहुन्छ। यदि तपाईं भाग्यशाली हुनुहुन्छ भने, तपाइँसँग प्रतिमाको नीलो डोमहरू, साथ साथै ओआमा सेटिङ सूर्य को एक ठूलो शट हुनेछ।
तपाईं पक्का हुनुहुन्छ भन्ने निश्चित गर्नुहोस् caldera तथापि शहरको छेउमा। धेरै मानिसहरू सोचेका थिए कि तपाईं पहाडको उच्च माथिल्लो वरपरको वरिपरि तपाईंको बाटो लुगा लगाउन सक्नुहुनेछ, एक आदर्श वेंटिज बिन्दु प्राप्त गर्न, तर कोण र अनुभव मात्र होइन।
अन्तमा, तपाईंले एक स्थान पत्ता लगाउनुभए पछि तपाईं लंगर गर्न जाँदै हुनुहुन्छ! सूर्यले सेटिङको लागि अगाडी बढाउँछ भने, अरू तपाईंको लुकेको फोटोग्राफिक ओसाईमा उत्सुक हुन जाँदैछन्, र निश्चित रूपमा तपाईंको क्षेत्रमा हावा गर्न चाहन्छन्। राम्रो स्थान पत्ता लगाउनुहोस्, र त्यहाँ 30-45 मिनेटको लागि लटकाउन इच्छुक हुनुहोस्, अन्यथा तपाईले केवल तपाइँको दृश्य गुमाउन सक्नुहुन्छ!
सैंटोरिनीको पछाडि हेर्नुहोस्
सैंटोरेनीमा सबैभन्दा सुन्दर साइटहरू क्यालेडर होइन, यो ओया मा सूर्यसेटको बारेमा वा अकुटोरीको कालो रेत समुद्र तटहरू हेर्ने छैन, तर वास्तवमा अन्वेषण गर्दै अन्य Santorini पहाड को पक्ष।
तपाईं हेर्नुहोस्, सैंटोरेनीमा ल्यान्ड गर्दा तपाई फिम्पियनको पूर्वी आधामा भेट्टाउनुहुनेछ, पर्वतको चोटीबाट अलग हुन्छ, जहाँ फिरा टाउनको मुख्य क्षेत्र बस्छ, बस पश्चिम यस केन्द्रीय एपेक्स को। अधिकांश मानिसहरू स्यानोटोनीमा हेर्न चाहन्छन् अगाडि या पश्चिमी पक्ष, जो caldera को सामना गर्दछ। ठीक छ त? निस्सन्देह, यो सुन्दर छ। तर, आफैलाई सोचको विघटन नगर्नुहोस् कि हेर्न को लागी Santorini को एक मात्र पक्ष हो।
सैंटोरेनीको पूर्वी पक्ष अधिक जटिल इलाकामा छ र प्रायः ढिलो हुन्छ। यो Santorini मा एक साहसिक साहसिक साहसिक को रूप मा लैंडिंग बनािन्छ, तर यो caldera-facing पक्ष देखि परिदृश्य परिवर्तन, Santorini को रूप मा एक किस्म को वृद्धि भएको छ।
फिरा टू ओआइको ड्राइभ, जुन मुख्यतया यो पहाडको पछाडिको छेउमा गरिन्छ, यस द्वीपमा बढी उल्लेखनीय विचारहरू मध्ये एक हो। सडकमा, केही हानिकारक र भित्री भाग, तपाईंलाई महसुस गर्नुहुन्छ जस्तो कि तपाईं नेपाल मोर्सोमा सडक हुँदै सवारी चालक भन्दा स्याउको उज्यालोको रूपमा हेर्नु भएको छ! यसबाहेक, यो प्राथमिक क्षेत्र हो जहाँ तपाइँ गतिविधिहरू फेला पार्नुहुनेछ जस्तै चिलिफ डाइविंग, एटीवी सवारी, र केहि सर्फिङ पनि।
अन्ततः, यस चापलूसी, द्वीप को अधिक रस्टिक साइज पनि अत्यधिक पोषक तत्व-घने माटो मा पाइन्छ, जो स्यानोटोनी मा भएको धेरै मदिराहरु को लागी जिम्मेदार छ। त्यसोभए यदि तपाई एक ओनफाइल हुनुहुन्छ जुन ग्रीस र सैंटोरेनिको वाइनको बारेमा अझ बढी पत्ता लगाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाई यस क्षेत्रमा शैक्षिक भ्रमणहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ।
सैंटोरिनीमा रक्सीको लागि हाम्रो मनपर्ने स्थान सान्टो वाइन हो, जुन टापुको एक मिडिया केन्द्र हो। साथै, स्यान्टोरिनको दक्षिणी पक्षमा, सैंटो वाइनहरूमा एक बार, रेस्टुरेन्ट र शराब चोकमा रहेको सुविधा छ जुन टापुको उत्कृष्ट दृश्यहरू प्रदान गर्दछ र दिनहुँ यात्रा र वाइन चश्मा पर्यटकहरूको लागि खुला छ!
हामी सबैलाई थाहा छ के अस्वीकार गर्दैनौं ...
सैंटोरेनि यात्राको साथ धेरै सर्वोत्कृष्ट छ, र विशेष गरी लक्जरी यात्रा, यति धेरै पाठ्यक्रम तपाईं caldera मा तैरना चाहते हो, blanched चट्टानों मा मुद्रा, र चट्टान पहाड मा टकटकी। हो। Do ती चीजहरू। त्यहाँ त्यहाँ रोक नगर्नुहोस्।
बस हराउनको लागी सैंटोरेनि नजिकैको आदर्श स्थान हो। तपाईं पुरा तरिकाले गल्ती गर्न सक्नुहुन्न।
श्रेणी: युगल यात्रा, युरोप, खाद्य र पेय, ग्रीस, इतिहास, यात्रा योजना टैग: fira, खाना, अंगूर पातहरु, greece, naoussa, oia, santo wines, santorini, thera, के कुराहरू, रक्सी, वाइनरी
← कस्तो प्रकारको यात्रा तपाईं प्रेम गर्नुहुन्छ?
क्षेत्रीय मेक्सिकन भोजन: 12 को Yucatan प्रायद्वीप मा डिश हुन्छ →